musha nyika dzakabatana Singers Eminem Childhood Story Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yakazara yemuimbi weAmerica ane zita rezita “Slim Shady".
Yedu vhezheni yeEminem's Biography uye Yehucheche Nyaya inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira uye kumuka kune mukurumbira nyaya. Kunyanya zvakadaro, hupenyu hwehukama hwaEminem, hupenyu hwehupenyu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva iye mumwe wevatungamiri vakuru uye vane simba zvikuru nguva dzose. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Eminem's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Eminem Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kutanga, Eminem (christened Marshall Bruce Mathers III) akazvarwa musi we 17th waGumiguru 1972 kuSt Joseph muMissouri, USA.
Ndiye ega mwana akazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Deborah Rae nababa vake, Marshall Bruce Mathers Jr. Tarisai, vabereki vaEminem.
Eminem Vabereki Marshall naDeborah.
Nyika yeAmerica yerudzi chena neChirungu, ChiGerman, Swiss neScotland midzi yanga ichiri mucheche baba vake pavakatsika nzira yevanotiza baba.
Nekuda kweizvozvo, Eminem anga ari ega-akasununguka akasimudzwa naamai vake mune izvo zvingafungidzirwe zvakanyanya sehupenyu hwekutama kunze kwekuti vazhinji vevanotama vafudzi. Nekudaro isu tinoti Eminem akararama hupenyu hunofamba panguva yehupenyu hwake hwepakutanga.
Eminem akarerwa ega naamai vake Deborah.
Zvinotenderera zvirokwazvo, mudiki naamai vake vakadzungaira pakati peMissouri neMichigan uye havana kuzombogara kwenguva yakareba zvakakwana pane imwe nzvimbo iyo Eminem wechidiki aigona kunodana kumba.
Ivo vakapedzisira vagara munzvimbo ine hukasha muDetroit uko Eminem yaizopedza makore akakosha ehudiki hwake.
Eminem Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Eminem haana "Shady" (nekukumbira ruregerero kuzwi rechipiri rezita rake remadunhurirwa) nhoroondo yedzidzo asi nhoroondo yakaoma yekunyoresa muzvikoro zvakawanda nekuda kwenzira inofamba yehudiki hwake.
Nekuda kweizvozvo, aigara ari mwana mutsva mubhokisi remhando yemudzidzi, budiriro yakamuona kwete kungova munhu akasurukirwa asi ari panjodzi yekunetswa nevadzidzi vakuru.
Eminem ane yakaoma dzidzo kumashure kubva kupuraimari kusvika kusekondari.
Taura nezvekushusha, pakanga pasina nzvimbo yakachengeteka yeEminem kuchikoro chesekondari sezvo aigara achisundirwa mumakamuri, kukona mumigwagwa uye kurohwa muchimbuzi.
Kunyange zvakadaro, Eminem aiwanzoonekwa semwana akangwara aive akaipa pane zvese zvidzidzo kunze kweChirungu. Aida kuverenga komiki uye akawana simba remazwi nekugara achidzidza duramazwi.
Eminem ndiye akabatwa nevanodheerera kwenguva zhinji yemazuva ake echikoro chesekondari.
Pamusoro wefundo yake muLincoln High School Warren, Eminem akatanga kubvarura neshamwari yake yekusekondari Mike Ruby paakanga ave nemakore gumi nemana.
Ivo vaviri vaiwanzo svetuka kirasi kuti vatore chikamu muhondo dzemahara rap pachikoro chepedyo chekudya kwemasikati. Vakagamuchira mazita echikuva "Manix" uye "M&M", ayo ekupedzisira akachinja kuva "Eminem".
Asingakwanise kutsungirira chero kuenderera mberi nechikoro, Eminem akasiya chikoro chesekondari semakore gumi nemanomwe uye akaenderera mberi nekupa zvimwe zvakakosha pakubata.
Eminem akatanga kubhinya kuchikoro chesekondari semakore gumi nemana.
Eminem Biography Chokwadi - Hupenyu hwepakutanga Mumhanzi:
Achigara zvakanaka nehupenyu sekuyaruka kwevechidiki, Eminem akashanda nesimba kuti ave anokosha mumimhanzi ye rap iyo yaitongwa nevanhu vatema panguva iyoyo.
Kuti azadzise chinangwa chake chaanoda Eminem akaisa basa rakawanda mukunyora rwiyo zvakanyanya nekudzidzira kunyora mazwi akareba nemitsara nenzira iyo yese yatinobvumirana.
Panguva iyo rap prodigy yaive pariri, akarova nechikwata chinozivikanwa se "The New Jacks" ndokuenderera mberi nekuumba rake rake boka - "Mweya Chinangwa" - nerutsigiro kubva kune rapper Chiratidzo uye nedzimwe shamwari dzehucheche.
Pamberi pekuparadzaniswa kwemapoka muna 1995, "Mweya Chinangwa" yakaburitsa imwe chete pa1995 yavo inonzi EP yaive naEminem uye Proof.
Chivharo che "Mweya Chinangwa" EP.
Eminem Biography Chokwadi - Rwendo rweMukurumbira Nhau:
Achienderera mberi, Eminem akaita mimhanzi yake yekutanga mumhanzi unonzi, "Do-Da-Dippity" yakaburitswa muna 1992. Makore gare gare, akabatana naRapper Proof nevamwe varidzi vana kuti vagadzire "The Dirty Dozen" (D12) mu 1996.
Eminem Na "Iyo Yakasviba Dhazeni" (D12).
Kutora nhanho padyo nemukurumbira, Eminem akasainwa kuna Jeff naMark Bass's FBT Productions uye akaburitsa dambarefu rake rakanzi "Infinite" mu1996.
Iyo album yakanga isiri yekutengesa kubudirira nekuda kwekuti iyo Eminem yekupaza maitiro panguva iyoyo yainge isina hukasha hwechisimba.
Chivharo cheEminem's debut album "Infinite".
Kukwana kutaura kuti rinotevera gore (1997) raive rakaipa kuna Eminem ane mamiriro emari akawedzera.
Urombo hwakazomanikidza iye-anouya-muimbi kuti atange kugara mumba maamai vake, budiriro yakamuona achigadzira anti-social-alter-ego inonzi "Slim Shady" pamwe nekunyora mutambo wake wekutanga wakawedzerwa nezita rimwe chete muna 1997.
Eminem Biography Chokwadi - Simuka Mukurumbira Nhau:
Hazvina kutora nguva refu Eminem 'Slim Shady' EP (Yakawedzerwa Kutamba) asvika kuna Dr Dre, muridzi we 'Aftermath Varaidzo,' uye nhengo yekutanga yeboka rehip-hop NWA Dre Akafadzwa netarenda raEminem uye akataura kuda kushanda na iye.
Eminem naDr.Dre mwedzi mushure mekunge vekupedzisira vateerera 'Slim Shady' EP.
Akashanda naEminem kumubatsira kuburitsa dambarefu rakanzi 'The Slim Shady LP,' muna1999. Iyo albha iyo yakarova singles senge 'My Name Is,' '97 Bonnie naClyde, 'pamwe ne' Guilty Conscience, 'yakatorwa Eminem mukurumbira uye akazove rimwe remagazini anozivikanwa pagore. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Eminem Anoda Hupenyu - Musikana, Wife, Vana?
Eminem ave akaroora kaviri sepanguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yazvino hukama chinzvimbo.
Kutanga, Eminem haazivikanwe kuve akambove nevanasikana vasati vasangana nehudiki hwake mudiwa akatendeuka mudzimai Kimberly "Kim" Anne Scott. Vaya vekare-rudo shiri vakatanga kufambidzana mu1987 apo Eminem aive 15 uye Kim aingova 13.
Eminem uye aimbova mudzimai wake Kim vakatanga sevadiki vechidiki.
Hwakanga hwakakura kwazvo hukama hwavo zvekuti Kim akatamira naEminem mushure mekunge atiza pamba. Kim akava nepamuviri paEminem makore akazotevera muna 1995 uye akabereka mwanasikana wemuimbi, Hailie Jade Mather muna 1995.
Eminem mwana wekutanga nemwanasikana, Hailie Jade Mather.
Kim naEminem vakaroora zviri pamutemo mu1999 uye vakaenderera mberi vaine hukama husina kugadzikana hwakagumiswa nekurambana muna 2001. Kim naEminem vakaroorwazve muna Ndira 2006 asi vakarambana muna Kubvumbi gore iro.
Kure naKim, Eminem aifambidzana nehukama hwevanhukadzi panguva yehukama hwake nehukama newaimbova mukadzi Kim. Ivo vanosanganisira Karrine Stefan, Mariah Carey, Britanny Andrews naJoy McAvoy.
Nhoroondo yekufambidzana yaEminem. LR: Karrine Stefan, Mariah Carey, Britanny Andrews naJoy McAvoy.
Nezve hukama hwake hwehukama, Eminem haana kuroora uye haana mwanakomana (s) asi kuwedzerwa kwevanasikana vaviri vakagamuchirwa. Ivo vanosanganisira muzukuru wemukadzi wake, Alaina Marie Mathers pamwe nemukadzi wake (aimbova mukadzi) kubva kune imwe hukama, Whitney Scott Mather.
Eminem vanogamuchira vanasikana Alaina Marie (kuruboshwe) naWhitney Scott (kurudyi).
Eminem Hupenyu Hwemhuri:
Eminem anobva kumuchesi wemhuri yemhuri. Tinokuudza chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve Baba vaEminem:
Marshall Bruce Mathers Jr ndibaba vaEminem. Iye akazvarwa pazuva re30th raJune 1951 uye akatanga kufambidzana naamai vaEminem aine makore 15.
Nguva pfupi Eminem aberekwa, Marshal anonzi akasiya mhuri ndokukanganisa chero nzira dzakagadzirwa kuti amubate.
Mushure mokunge Eminem asimuka mukurumbira baba vake - zvino achishanda semushandi wekuvaka - akanyora tsamba yeruzhinji ichiratidza kuda kwaaiita Eminem uye akapomera mukadzi wake wekare (amai vaEminem) yekuita kuti vanhu vamutarise sababa vakaipa.
Baba vaEminem Marshall Bruce Mathers Jr.
Deborah Rae ndiamai vaEminem. Iye akazvarwa pa6th yaNdira 1955 uye akabereka Eminem se 17-gore-rekare.
Deborah haana kumbobvira ave nehukama hwakasimba husingaperi naEminem sezvakaratidzwa mune mamwe ma rappers anonyangadza mazwi nezve mhando yehukama hwavaive nahwo.
Paakave nemukurumbira, Deborah akaita zvisina kubudirira kuedza kuve mumabhuku akanaka aEminem. Zvisinei, vakatanga kuchengetedza hukama hwakanaka mushure mokunge Eminem adzidza kuti ane kenza.
Amai vaEminem Deborah Rae.
Nezve hama dzaEminem:
Eminem ane mukoma wamai munin'ina anonzi Nathan Kane Samara. Nathan naEminem vakakurira pamwe chete pane imwe nguva vasati vamboendeswa kumusha wevabereki nekuda kwekutadza kwaDeborah kumuchengeta.
Eminem ane nzvimbo yakapfava yemunun'una wake ipapo, chisungo chepedyo icho chinoramba chichienderera mukujeka kwenyaya inofadza yehucheche nyaya yakaumbwa nehukama hwavo.
Mufananidzo usingawanzoitika weEminem naamai vake uye munun'una mudiki Nathan.
Asides Nathan, Eminem ane vamwe vaviri-vana vehama. Ivo vanosanganisira mukoma wababa-hanzvadzi Sarah Mathers uyo akaona kuti anogoverana zvakafanana ropa reimba naEminem muna 2005. Mumwe wacho munin'ina wababa vehafu anozivikanwa anonzi Michael Mathers.
Kure kubva kumhuri yepedyo yaEminem sekuru vake baba vaMarshall Bruce Mathers apo ambuya vake vaive Rae Waverly Drowns.
Vanasekuru vaamai vaEminem ndiRobert Ray Nelson naBetty Hixson zvakateerana. Nekudaro, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini, babamunini uye babamunini. Kana iye haana kuzivikanwa pamwe nababamunini vake.
Eminem Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Eminem akanganise? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemufananidzo uzere wake. Kutanga, Eminem's Persona isanganiswa yeRibra Zodiac maitiro. Anoda kuziva uye ane hanya zvakanyanya.
Uye zvakare, Eminem anofungidzira asina matambudziko nekuburitsa zviitiko zvinozivikanwa zvehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika.
Zvido zvake zvinosanganisira kuverenga duramazwi, kutamba mitambo yemavhidhiyo, kuteerera kuMimhanzi pamwe nekupedza nguva uine shamwari nemhuri. Iye zvakare anofarira munhabvu nezvematongerwo enyika.
Eminem anofarira kutamba mitambo sechiitiko chemutambo.
Eminem ine mari inofungidzirwa kuti inokosha ye $ 210 sepanguva yekunyora. Kunyange zvazvo isiri mubhadharo wemari, kuongorora kwakabva pfuma yake nekushandisa maitiro zvinomuratidzira semunhu anorarama mararamiro anoshamisa achishandisa mari yaanoita kubva pamabasa ekuimba uye kubvumirana kunoitwa.
Kugara kwake pari zvino kuClinton Township, Michigan kunokosha kudarika $ 1,483,500. Imba iyo inoitika kuva imwe yedzimba zhinji dzeEminem i8,900 square-foot imba ine dzimba dze Deluxe.
Kuva mudiwa wemotokari murapi ane zvikamu zvakanaka zvinosanganisira Porsche Carrera GT, Audi R8 Spyder, pamwe neFerrari 599 GTO, uye Ferrari 430 Scuderia.
Chikamu chechikamu cheEminem House neMota.
Eminem Untold Chokwadi:
Kuputira Eminem Childhood Biography pano pane zvimwe zvisinganzwisisiki izvo zvisingawanzobatanidzi muhupenyu hwake.
Kufanana nezviitiko zvakanyanya mukurumbira mutsika dzepop, Eminem ane maTattoo akati wandei anotsanangura rudo rwake kumhuri uye shamwari dzepedyo pamwe nekuratidzira hupenyu hwake kutambudzika.
Ivo vanosanganisira zita uye mufananidzo wemwanasikana wake Hailey, mutero kushamwari yake yepedyo yekufa Chiratidzo pakati pevamwe.
Mufananidzo unoratidza maTatoos akakurumbira aEminem.
Nezvechitendero chake, Eminem aiva nehutano hwehuduku, semugumisiro, chitendero chakanga chisiri chikamu chakakosha chekurera kwake. Zvisinei, akabvuma pachena kuti ave nokutenda muna Mwari uye akaratidza kuonga kwake chiKristu.
Kunze kwemimhanzi, Eminem akaita mamwe mafirimu mamwe acho anosanganisira 1.8 Mile (2002), Da Hip Hop Witch (2000) uye Mapenzi Vanhu (2009).
Eminem akarekodha kuoneka kwemufirimu muVaraidzo Vanhu (2009).
The Rapper uyo achangopemberera makore 20 ekunyanyisa munaApril 2018 haafaniri kunwa mukunwa. Zvisinei, hazvina chokwadi kana achiri kusvuta.
Eminem Biography Vhidhiyo Pfupiso:
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Kucho Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa tichiendesa kwauri Nhoroondo yeAmerican Singers. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!